DAAWO VIDEO:isaaqow Sanaag Waa Ku dhimanaysaan Yaasiin Ducaale Oo Kahadlay Dagaalka Sanaag Ee somaliland – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeMaqal Iyo MuuqaalDAAWO VIDEO:isaaqow Sanaag Waa Ku dhimanaysaan Yaasiin Ducaale Oo Kahadlay Dagaalka Sanaag Ee somaliland
February 27, 2020 marqaan Maqal Iyo Muuqaal, Puntland, Somali News, Somaliland 6
Reer koonfurka ayaan ka hayaa maahmaah ahayd “Barroow iyo Barreey Way Isku Baadi Maqan Yihiin” ama wax la mid ah. Iminka Hartigu iyo guud ahaan ba Qowmiyadda Daarood reero shiddo ma aha sida laga wada markhaatiga yahay. In ay wax dhisaan mooyaanee wax ma dummiyaan. In ay wax hagaajiyaan mooyaanee wax ma kharribaan. In ay Soomaali isu soo dumaan mooyaanee ma kala didiyaan. Sabab?
Maahmaahda ah “Ninka Ugu Ildheer Baa Dadka Ugu Ayaan Daran” ayay jawaabtaasu ku duugan tahay. Maadaama ay gobtani tahay xadaariyiinta Soomaaliyeed ee qarniyo badan ilbaxnimada loogu soo hiran jiray ayaa waxay mashaqo kala haysataa iyaga iyo kuwa kale ee aan la faca ahayn ee dhawaan indhaha kala qaaday sida iidoorka iyo Hawiyaha. Isku dhaayo wax kuma dheehdaan oo nolosha iyo dowladnimada aragti siman kama leh.
Caaqiliin horumar iyo qarannimo u taagan iyo waxay kala noqdeen cawaan ragaad iyo kala qaybsanaan u taagan. Fallaaxyo nabaddoono ah iyo waxay u kala baxeen fallaago colaad doon ah. Waa kuwaas isku baadi badan ee Alloow sakhir amuuraha!
Arboowe Isaaq reer shiekh isxaaq xoog bada weynaa oo dhaqaale iyo lacag iyo maal badanaa.
Xoog badanaa isaaq!!!!
Faanka iyo faataabakhda Hartigu wuu u dhashey oo taasi annaga wax kasoo qaad lamana laha. Walaweyntiina imika barte Ilmo faanooleyaal iyo caadkooda. Kkkkk
Taariikh dhow oo Sayidkii, Shiirshoor iyo Aljabarti baa Carab ahaa ka danbeysay ayaa jirta oo ay rabaan in Munaafiqiintii tirtirto. Taasoo oo ay bogageeda madow aad ugu suntantihiin. Shaley uunbey aheyd kolkay Afweyne u shaxshax leynayeen ee ay Soomaalidii kale gamta uga saarayeen Magacan ay Xeel dheerinimada, wanaaga iyo xushmada iyo sharafta ku hagoogayaan. Taasna waxa daliil u ah munaafiqiintii oo dhan ayaa sida fiinta maanta u qeylinaya, kolkii cidnaba kama fadli badiniide aayar fadhiista lagu yidhi. Kkkkkkk
Boowe waan wacnaan jirney, Boowe waan wanaagsanaan jirney, Boowe waan Qadarin badneyn. Kkkkk Faataa bakhleyaal, Soomaali waxaas ka gadi kari meysaan. Illaa iyo Shaanshidii aanan qabiilkaba aqoon ayaa maanta indhuhu u kala furan yihiine ogaada Munaafaqiintoow.
Idinkuna weli Aqalkii Faanka iyo Beenta ayaad Asleysaan, Intayada kalena waanu idinku Qosleynaa.
Ahmad. Faaanka & dhuusada wada socota u reerka adeeer. hanti ayay u leehiin.
Faanka & dhuusada wada socota u daa reerka, hiti ayay u leeyiin.